News & Events - Shwe Bank
Boxer Avenuem, New York, NY 22018 Mon - Sat 7.00 - 18.00 +343 5434 54345
About Shwe Bank
EngCurrent post in Eng
MynCurrent post in Myn
HomeNews & EventsPage 2
Call Deposit and Special Deposit
လူကြီးမင်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိလှသော ငွေကြေးများကို (Call Deposit ) နေ့စဉ်အတိုး( 4%)နှင့် (Special Deposit) နေ့စဉ်အတိုး(8.50%) ဟူ၍အတိုးနှုန်း(၂) မျိုးပေးထားပါသည်။ ထိုအတိုးနှုန်းများထဲမှနှစ်သက်ရာAccount ကို ရွေးချယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ (၂)မျိုးစလုံးကိုသော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်၍ လူကြီးမင်း၏ငွေကြေးများကို တိုးပွားအောင်...
ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း (Saving Deposit)
လူကြီးမင်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိသည့်ငွေကြေးများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော "ရွှေဘဏ်"တွင် အပ်နှံစုဆောင်း၍ မြင့်မားသည့်အတိုးနှုန်းများကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း (Saving Deposit) -Saving Deposit အား ကနဦးကျပ်ငွေ (၁၀၀၀) ဖြင့် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးနှင့်အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။...
ရွှေဘဏ်၏ ATM Debit Card ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်
ကနဦးကျပ်ငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်၍ ကတ်တန်ဖိုး ပေးရန်မလိုသည့် ရွှေဘဏ်၏ ATM Debit Card များကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ရွှေဘဏ်၏ ATM Debit Card ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်....... - ရွှေဘဏ် ATM...
ရွှေဘဏ် (ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း
လူကြီးမင်းတို့အား ခေတ်မှီ၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် ရွှေဘဏ်၏ ဒုတိယမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော ဘုရင့်နောင်ဘဏ်ခွဲကို ယနေ့ ၅၊၁၂၊၂၀၁၆ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အမှတ် ဋ...
စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း (Fixed Deposit)
Fixed Deposit အား အနည်းဆုံးအပ်ငွေ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ဦးနှင့်အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အတိုးနှုန်းများမှာ - (၁) လ စာရင်းသေအပ်ငွေလျှင် (၉%) (၃) လ စာရင်းသေအပ်ငွေလျှင် (၉.၂၅%)...
USD - BUY 1390/ SELL 1440
EURO - BUY 1580/ SELL 1630
"btext">SGD - BUY 990/ SELL 1060
THB - BUY 43/ SELL 47
Shwe Bank Agents ရွှေဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း
Shwe Bank Agents ရွှေဘဏ်၏ ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသအသီးသီးတွင် တည်ရှိသည့် ရွှေဘဏ်၏ အေးဂျင့် စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီတွင် ထပ်မံတိုးမည့် အေးဂျင့်စာရင်းများအားလည်း ကြေငြာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1ကျောက်တံတားမြို့နယ်SkyNet RSPအမှတ် (၃၅၀)၊ မြေညီထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း …
66-76, Corner of Merchant Road and
Pansodan Street, Kyauktada Township,
Card Services Hotline
09-260-633-870, 01-230-6910 (Ext: 2)
Keep Our News Update
Don't miss to subscribe to our new feeds
© 2020 Shwe Bank. All Rights Reserved. Another Creation of Media Lane, The Creative Agency